Nkuzi Bekee na Montreal | BLI
Site na klaasị di omimi, izu ụka na klas nke gbadoro ụkwụ maka ụmụ akwụkwọ.
Usoro ọmụmụ EnglishChọta mmemme nke dabara na mkpa gị
Nkuzi Bekee BLI gbadoro anya na imepe asusu asusu anọ: ikwu okwu, igu ihe, ige nti na ide ihe edere ede nke oma, okwu na uda olu.
BLI na-enye usoro mmemme dịgasị iche iche iji daba mkpa nke onye mmụta ọ bụla. Site n'ọtụtụ nhazi na nhọrọ dị iche iche, anyị nwere ike iburu gị nkwukọrịta bụ isi na mmụta mmụta dị elu site na itinye aka na nkuzi siri ike nke ndị nkuzi nwere ahụmahụ na-aghọta ihe mgbali gị na ebumnuche gị.
Na ngwụsị nke mmemme ahụ, ị ​​ga-enwe ahụ ike nke ọma iji mkparịta ụka na nke ebighi ebi na nke eke, ị ga-enwe ike iji echiche ziri ezi na izi ezi zie echiche gị n'ọnọdụ dị iche iche.
9: 00 - 4:35 PM
9: 00–4: 35 PM
9: 00 - 12:00 PM
36 Ihe nkuzi n’otu izuNnukwu ọkụ
Mee ka ihe omuma gi n’ezi asusu di iche site na mmepe oru ngo na imuta ihe omumu. Mụta nkà ide ihe gị, zụlite ikike ige gị ntị, meziwanye ikike ịgụ akwụkwọ gị.
Asụsụ Bekee Pụrụ Iche
30 Ihe nkuzi n’otu izukpụ ọkụ n'ọnụ
Mee ngwangwa usoro mmụta gị site na klas pụrụ iche ESL / FSL. Site na njikota ihe omumu nke emeghari na ihe mmuta nke ọdịnala. Họrọ klas dabere na mmasị mpaghara gị.
9: 00 - 3:20 PM
9: 00–3: 20 PM
9: 00 - 2:05 PM
9: 00–2: 05 PM
24 Ihe nkuzi n’otu izuOge niile
Nakwa ikari asusu asusu ano n’ebe umu akwukwo no ma buru ihe ikwurita okwu, tolite nziwanye gi nke oma site na ulo akwukwo iji nyere gi aka imeziwanye onu ikwu okwu gi.
18 Ihe nkuzi n’otu izuỌkara oge
Mụọ ma na-eme akụkụ niile nke asụsụ ị na-amụ nke na-ekpuchi nkà niile anọ (ọgụgụ, ide, na-ekwu okwu na ige ntị), ụtọ asụsụ na usoro iji okwu mkparịta ụka na klaasị siri ike ma na-etinye aka.
9: 00–12: 00 PM
Mmemme Bekee IzugbeNkọwa nke klaasị
N ’ụlọ akwụkwọ a, ụmụ akwụkwọ ga-amụta ihe niile dị mkpa maka ụtọ asụsụ na asụsụ Bekee na French. Nke a bụ klas mmekọrịta ebe ụmụ akwụkwọ nwere ohere iji asụsụ ụtọ wee mụta banyere iwu site na nchọta, site na nduzi nke onye nkuzi na nkọwapụta doro anya. A na-etinyekwu ike na inwe ike ikwurita okwu site na iji ụtọ asụsụ, ọ bụ ya mere enwere ọtụtụ ohere ịmụ na iji melite. Studentsmụ akwụkwọ ga-amụ asụsụ 4 (na -ege ntị, na-ekwu okwu, na-agụ ma na-ede) ya na ọnọdụ njikọ. Isiokwu klaasị ọtụtụ ihe dị mkpa dị mkpa site na usoro mmụta dị iche iche na-akwado nkwukọrịta na gburugburu ụwa n'ezie. Studentsmụ akwụkwọ kwalite asụsụ asụsụ ha site na iji akwụkwọ mmụta yana site na isonye n'ọtụtụ ihe dị iche iche iji nyere ha aka mmụta na agam n’ihu.
Mmụta a na-arụ nnukwu ọrụ Bekee / French ma ahaziri ya gburugburu isiokwu emere iji meziwanye usoro nkwukọrịta ụbọchị eke niile. Ebumnuche na klaasị a bụ ịzụlite were were were. Onwere ihe n’ile anya na ikwu okwu na imekorita ya n’etiti umu akwukwo ka ha we tinye ihe ha mutara na klas ha gara. Klaasị ahụ na-emekọ ihe ọnụ ma gbaa ndị otu na-arụ ọrụ ume iji mezuo ebumnuche nke ịmekọrịta dịka onye na-ekwuchite ama ama ma na-ama ụmụ akwụkwọ aka site na ọrụ na mmemme dabere na ntanetị dịka egwuregwu-arụ, arụmụka, mkparịta ụka, ịkọ akụkọ, mkparịta ụka ma ọ bụ egwuregwu okwu. mini oru ngo.
Thislọ akwụkwọ a ga - eme ka ihe ọmụma gị ka mma banyere asụsụ dị iche iche site na mmega na ike dị iche iche. Oge ọ bụla, enwere mgbakwunye dị iche iche, dịka ịgụ, ide, ige ntị, ikwu okwu, okwu na okwu, gụnyere okwu, yana ịkpọ okwu na mmụta na-arụ ọrụ. Enwere ngalaba dị iche iche ahaziri maka ọkwa nke ọ bụla, site na onye mbido ruo n'ọkwa. You nwere ike ị mụta ụzọ e si ede akwụkwọ site na iwepụta akwụkwọ akụkọ ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ iwulite ikike ige gị ntị site na ịgagharị ụwa nke redio na pọdkastị.
Emebere klas a iji nyere gị aka mee ngwa ngwa mmụta gị ka ị na-enye gị ohere ịhọrọ ọmụmụ dabere na ihe ndị ị chọrọ na mkpa gị. Oge ọmụmụ ọ bụla anyị na-enye ọzụzụ pụrụ iche dị iche iche nke English / French nwere isiokwu ma ọ bụ nke gbadoro ukwu etiti, dịka Bekee / French na fim na egwu. N'ihi na ụmụ akwụkwọ pere mpe na klaasị a, ndị nkuzi na-elebazi anya nkeonwe.
Isi Ihe Mmemme
Malite mmalite ụbọchị
Mininum 1 izu (Enweghị maximium)
Ogologo ihe omumu
Nkezi 12 | Oke 16
16 na okenye
Mmalite na Eluigwe
Mmemme enyere na